Podium : Nanomboka tamim-pilaminana ireo fety aman-danonana -
AccueilRaharaham-pirenenaPodium : Nanomboka tamim-pilaminana ireo fety aman-danonana
19/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa miditra tanteraka ao anatin’ny fety ny Malagasy. Nanomboka tamim-pilaminana ny faran’ny herinandro teo irey fety aman-danonana hanamarihana ny fetim-pirenena. Nisantatra izany ny « Carnaval de Madagascar » notanterahina nanomboka ny alakamisy lasa teo tetsy amin’ny araben’ny fahaleovantena izay nentina tamin’ny lohahevitra « Malagasy miara-paly ». Tao anatin’ny telo andro, dia niriara tamin’ny araben’ny fahaleovantena ny mponina niatrika ity hetsika ity. Ankoatra ny fitsidihana ireo tranoheva samihafa izay nampahafantarana ireo faritra samy hafa eto Madagasikara, dia nameno ny araben’ny fahaleovantena ihany koa ireo karazan-dalao, samihafa. Saika ho an’ny ankizy ny ankamaroany, nefa nanana ny anjarany ihany koa ireo olon-dehibe. Anisan’ny nanafana ny « Carnaval de Madagascar » ireo sehatra telo natao ho an’ny mozika izay tsy afa-misaraka amin’ny lanonana toy izao. Samy nahazo ny anjara tandrify azy ny rehetra nandritra ny telo andro naharetan’ny hetsika. Anisan’ny tsikaritra nahafaly ireo kilonga teny amin’ny araben’ny fahaleovantena ny fandokoana sy fanaovana « art » tamin’ny endrik’izy ireo, indrindra ny ankizy vavy kely. Tany amin’ireo « Lalao vidéo » sy ny fampisehoana ireo hakingana amin’ny BMX kosa ireo tovolahy kely. « Samy manana ny mahavariana azy fa miezaka manome fahafaham-po ny tsairairay e !», araka ny fanamarihan-dRasoalofomanana Julien, raim-pianakaviana nitondra ny fianakaviany teny Analakely omaly. Tsy afa-misaraka amin’ny fety aman-danonana toy izao ny sakafo, ary misy ireo tranoheva natokana ho an’izany. Nanome voninahitra ireo faritra tsirairay ny faritra fampirantiana ireo asa-tanana sy vokatra avy any amin’ny faritra tsirairay amin’ireo tranoheva 50 manamorona ny araben’ny fahaleovantena.
Sehatra roa lehibe
Nahasarika ireo mpijery maro ny fampisehoana notanterahina teo amin’ny sehatra Baobab izay nitondran’ireo mpanakanto maro ny talentany. Nisantatra izany ny zoma lasa teo ry Mika sy Davis, Dat’kotry ary Dodol. Nanohy izany ny sabotsy ry Kaôsy spirits, Farakely ary ny tarika Mahaleo. Omaly kosa dia nifandimby nanafana ny sehatra goavana ry Tambour Gasy, ny team safelika sy ireo hira feno hatsikana ary Samoëla.
Saika ireo vakodrazana kosa no natolotry ny Carnaval de Madagascar teo amin’ny sehatra Ravinala. Ankoatra ireo mpanaknato avy amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara, dia niavaka tamin’ny fandraisany anjara tamin’ity « Carnaval de Madagascar » ity ny tarika avy atsy amin’ny Nosy Maorisy, ny Moz’art artistic. Nandritra ny fandraisan’izy ireo anjara no nanehoan’izy ireo ny kolontsaina Maorisina na teo amin’ny mozika na teo amin’ny dihy. Nampiavaka ireto mpanakanto avy atsy amin’ny Nosy Maorisy ireto ny fitafiana marevaka nataon’ireo andrimabavilanitra mpanakanto mpihira sy mpandihy, notronin’ireo mpitsoka mozika sy mpively langoroana.
Sehatra iray nihavaka kosa ny tao amin’ny Café de la Gare, izay toerana natokana ho an’ireo olona nasaina manokana. Ny seho takariva niarahana tamin’ny tarika Samoëla no anisan’ny nanafana ity sehatra ity ny alin’ny zoma lasa teo. Seho izay efa andran-tsira sahady tamin’ny endriky ny fampisehoana natolony tetsy amin’ny sehatra baobab omaly. Tao amin’ity toerana ity ihany koa no nisian’ny alim-pandihizana nanamarihana ny hetsika Carnaval de Madagascar nampisalorana ny anarana hoe « Bal Maventy » . Jazz MMC sy Lico Kininike no nanafana sy nampitsinjaka tamn’izany.
Noho isika firenena mino an’Andriamanitra. Nanamarika ireo hetsika nisantarana ireo fety aman-danonana samihafa amin’izao fetim-pirenena ireo ihany koa ny hira fiderana. Tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina no nitondrana am-bavaka ny firenena ka niarahan’ny tarika Joseph d’Af sy Antsan’i kristy nanentana. Ny tarika Joseph d’Af no nisantatra ny seho tamin’ireo hira mitory ny fitiavan’Andriamanitra. Nandimby azy avy eo ny Antokom-pihiran’ny Chepelle Amparibe, Sodifafana ary ny Antsan’i kristy no namarana azy. Ankoatra ny hira fidererana dia nentin’ny mpanentana tamin’ity seho fiderana ity ihany koa ny fanentanana ny fitiavan-tanindrazana.